Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jamaica News Breaking » Carnival Sunrise Cruise Ship Arrival ee Jamaica maanta
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • saaciday inay • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Jamaica News Breaking • News • Dib-u-dhiska • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka
Carnival Sunrise markab dalxiis oo ku yaal Jamaica
Markabka dalxiiska ee Carnival Sunrise ayaa la qorsheeyay inuu gaaro Ocho Rios, Jamaica, maanta, Isniinta, Sebtember 13, 2021, oo ay saaran yihiin ku dhawaad ​​1,700 oo rakaab ah.
Tani waxay noqon doontaa markabkii saddexaad ee markabka markabka marka dib loo furo dalxiiska dalxiiska bishii Ogosto 2021.
Laba qof oo hore u soo safray doontii bishii Ogosto ayaa guulaystay dhammaan hab -raadkii loo baahnaa ee lagu heshiiyey khadka safarka ayaa si aad ah loo arkay oo loola socday.
Carnival Sunrise waa inay la kulanto tillaabooyin adag oo xukuma dib u bilaabashada maraakiibta badda.
Dalxiiska Jamaica Wasiir, Mudane. Edmund Bartlett, wuxuu sharraxay “tani waxay noqon doontaa markabkii saddexaad ee markabka socda marka dib loo furo dalxiiska dalxiiska bishii Ogosto 2021. Jadwalka xilliga dalxiiska waxaa lagu heshiiyey Khadka Carnival Cruise ka hor inta aan la soo rogin maalmaha dhaqdhaqaaq la’aanta Xeerka Maaraynta Khatarta Masiibooyinka. ”
"Labadii qof ee hore u soo safray bishii Ogosto way guuleysteen, dhammaan hab -raadkii loo baahnaa ee lagu heshiiyey xariiqa maraakiibta si aad ah ayaa loo dhawray oo loola socday," ayuu raaciyay.
Wasiir Bartlett wuxuu sharraxay in borotokoollada iyo dabagalka adag ay sii jiri doonaan tan iyo tan wicitaannada maraakiibta ee socdaalka. Imaanshaha booqdayaasha safarka ayaa loo oggol yahay inay booqdaan xarumo kaliya oo ku yaal Waddooyinka Adkeysiga ee ay xaqiijisay Shirkadda Horumarinta Waxsoosaarka Dalxiiska (TPDCo) oo loo oggol yahay inay ku safraan oo keliya gaadiid shati ku leh Xeerka Guddiga Dalxiiska.
“Carnival Sunrise waa inay la kulanto tallaabooyin adag oo xukuma dib u bilaabista maraakiibta safarka, oo u baahan ku dhawaad ​​95% rakaabka iyo shaqaalaha in si buuxda loo tallaalo oo dhammaan rakaabku ay keenaan caddayn natiijooyin taban oo ka soo baxay tijaabinta COVID-19 oo la qaaday 72 saacadood gudahood markabka. Marka laga hadlayo rakaabka aan la tallaalin, sida carruurta, baaritaanka PCR waa waajib, dhammaan rakaabka ayaa sidoo kale la baaraa oo la tijaabiyaa (antigen) si loo soo galo, ”ayuu yiri Wasiir Bartlett.
Wasiir Bartlett wuxuu kaloo carrabka ku adkeeyay in dekedda wicitaanku ay la kulantay borotokoollo ay dejisay Wasaaradda Caafimaadka iyo Fayo -qabka iyo shirkadaha maraakiibta, iyadoo TPDCo ay sidoo kale la socoto u hoggaansanaanta xeerarka.
“Golaha Wasiirradu waxay gaareen go’aan lagu fududeynayo imaatinka doonnida ee maalinta dhaqdhaqaaq la’aanta si loo maamuuso heshiiskii aan la galnay Khadka Carnival Cruise. Waxaan ku kalsoonahay in borotokoollada iyo kontaroolada adag ee la diyaariyey ay ku filan yihiin badbaadinta dadkeenna iyo rakaabka imanaya labadaba, ”ayuu raaciyay Wasiir Bartlett.
Wuxuu xusay in: “Dadaalka aan ku doonayno inaan ku ilaalino nolosha iyo hab -nololeedka, Dawladdu waxay doonaysaa inay ilaaliso jagada Jamaica oo ah meesha ugu horreysa ee dalxiiska ee gobolka iyadoo si dhow ula shaqeyneysa lamaanayaasheena markabka si aan u ilaalino heerarka ugu sarreeya ee amniga.”